Xuska Maalinta Dhallinyarada Soomaaliyeed ee 15-ka May - Jowhar somali news leader
Home NEWS Xuska Maalinta Dhallinyarada Soomaaliyeed ee 15-ka May
Xuska Maalinta Dhallinyarada Soomaaliyeed ee 15-ka May
Dal kasta waxa uu ku faano ama saacida horumarkiisa waa dhallinyarada oo aan looga maarmin difaaca ama ilaalinta dadka iyo dalka,kuwaas oo haddii la waayo waxqabadkooda keeni karta gaabis ama dib u dhac kale oo ku yimaada dhanka ilbaxnimada, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada.
Inkastoo dagaallo gumeysi diid ah ay dhaceen qarnigii 15-aad iyo horraantii qarnigii 19-aad,haddana,waxaa mudadii uu socday dagaalkii 2-aad ee dunida gudaha Dalka Soomaaliya ka bilowday dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo la doonaayey in meesha looga saaro wadamadii shisheeye ee dalka u yimid in ay ka fuliyaan dano dhaqaale,iyagoo adeegsanaya qaab gumeysi casri ah oo ka duwan xilligii is-adoonsiga ee dunida laga mamnuucay 1812-kii.
Sanadkii 1943-dii waa markii ugu horeysay ee gudaha Dalka Soomaaliya ay ka bilowdeen dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ay horkacayaan sadex iyo toban Dhallinyaro (13) oo wax bartay,kuna mideysan Naadiga Dhallinyarada Soomaaliyeed,kuwaas oo u howlgalay raadinta wadajirka Umaadda iyo baadigoobka xornimo dhameystiran oo wada gaarta Shacabka Soomaaliyeed.
Aasaasayaashii Ururka SYL
C/qaadir Sheekh Sakhaawadiin Guddoomiye
Yaasiin Xaaji Cismaan Sharmaake
Maxamed Xirsi Nuur (Sayidiin)
Xaaji Maxamed Xussen Mahad
Cismaan Geedi Raage
Dheere Xaaji Dheere
Daahir Xaaji Cisman (Dhaga-weyne)
Cali Xaasan Maslax
Maxamed Cali Nuur,
Maxamed Faarax Hilowle
Maxamed cabdullahi Xayeesi
Huudoow Macalin Cabdullahi Saalax
Maxamed Cisman Baarbe Bardh
Dhinaca kale, Gobolada Woqooyi,waxaa xilliyadasi ka jiray dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ay horkacayeen Ururka SNL(Somali National League),kuwaas oo u howlgalay dadaallo lagu raadinaayey midnimada Soomaaliyeed oo ay aasaaskeeda lahaayeen Ururka SYL.
Sanadkii 1947-dii waa markii labaad ee lagu dhawaaqay dhismaha Ururka Xoreynta Dhallinyarada Soomaaliyeed) SYL oo baddalay magacii Naadiga Dhallinyarada,wuxuuna kulmiyay dadkii Soomaaliyeed ee doonaayey in la helo xoriyad.
Sanadkii 1948-ddii Ururka SYL,waxa uu awood u yeeshay in dhaqdhaqaaqyo gobanima-doon ah lagu baaahiyo guud ahaa gobolada dalka iyo deegaanada kale ee ay dagaan dadka Soomaalida,sida Kenya, Itoobiya iyo Jabuuti.
Sanadkii 1949-kii maamulkii Ururka SYL waxa ay ku guuleysteen in qoraal ku saabsan xaaladda gumeysiga iyo sida ay u doomayaan xoriyad loo gudbiyo Xaruta Qaramada Midoobay,waxaana 1-dii April sanadkii 1950-kii Soomaaliya loo ogolaaday 10-sano oo xornimo gaarsiin ah oo dadka lagu barayo nidaamka dowladnimo ee loo soo halgamay.
Sanadkii 1956-60-kii dii,Ururka SYL ,waxaa ay hoggaamiyeen Dowladdii Daakhiliga ama ku meel gaarka aheyd,iyagoo gacan ka helaya culuma’udiinka ,odayaasha dhaqanka,haweenka, shaqaalaha muruq-maalka ah iyo aqoonyahanno kale,waxaana xiiligaasi suurtagashay in Ururka SNL ee gobolada Woqooyi ay qeyb ka noqdaan Raadinta midnimo Soomaaliyeed oo aaan ku xirneyn wax shuruud ah.
Waxaa dhab ah in dad badan oo ka mid ah qeybaha Bulshada ay naftooda ku waayey taageeridda dhaqdhaqaaqyadii Ururka SYL iyo ka qeybgalkii kacdoonkii xoriyad doonka ee Soomaaliya,halka dhinaca kale la tilmaamay in ay jireen dad yar oo diidanaa in laga hoos-baxo gumeysiga oo la qaato xoriyad,kuwaasina waxay ahaayeen qaar taabacsanaa maamulkii gumeysiga ee soo maray Dalka.
15-a May waa maalin qaran oo dalka Soomaaliya laga xuso aasaaskii Ururka gobanimo-doonka SYL, kaasoo ahaa ururkii ugu horeeyay ee dalka laga hirgaliyo,lana yimid halgan adag oo loo soo galay hanashada xoriyadda Dadka iyo Dalka.
Waxaa lagama maarmaan ah in dhallinyarada Soomaaliyeed ay u istaagaan kaalinta ay ku leeyihiin geeddi socodka barnaamijyada horumarineed ee Dadka iyo Dalka, iyadoo sidoo kale ay waajib tahay in ay ka qeybqaataan badbaadinta Umadda iyo raadinta qaran dhameystiran oo wax la qeybsada shucuubta caalamka.
Dhallinta ama jiilka cusub ee Soomaaliya waxaa looga fadhiyaa in ay la yimaadaan doorkii looga bartay Ururka Dhallinyarada SYL ,isla markaana ay la socdaan tabaha iyo xeelad kasta oo ay la iman karaan kuwa doonaya in dadku aysan ku tallaabsan barwaaqo iyo horumar.
Maadaama lagu jiro xilli adag ,cidda kaliya ee dalka gaarsin karta nabad iyo horumar waa Dhallinyarada oo u baahan in la siiyo tallooyin ka qeyb qaadan kara difaaca dalka iyo soo celinta xasiloonida.
Haddaba,anagoo ka faa’ideysaneyna fursadda sanadguurada 78-aad ee ka soo wareegatay aasaaska Ururka Dhallinyarada Soomaaliyeed,aawadeed,waxaan halkaan ka direynaa dhambaal hambalyo ah oo ku socda Dhallinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyo xaalad kasta oo ay ku nool yihiin.
Ugu dambeyntii Dhallinyarada Soomaaliyeed waxaan u rajeyneynaa horumar iyo mustaqbal wanaagsan oo ifiya noloshooda.
Previous articleDR Congo is sentencing 30 people to death for clashes with police in Kinshasa
Next articleSheekh Shariif oo ka hadlay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed